သိပ္ပံပညာရပ်က ဘုရားကိုယုံကြည်ဖို့ လုံလောက်သောအကြောင်းအရင်း ပေးပါတယ်။ ဒီအဲန်အေက ဘာကြောင့် အရေးကြီးပါသလဲ?
ဗြိတိသျှအတွေးအခေါ်ပညာရှင် ဒေါက်တာအန်ထော်နီဖလူးဟာ ဘုရားမဲ့ဝါဒအတွက် အဓိကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး စကားစစ်ထိုးပွဲတစ်ခုပြီးတစ်ခု တက်ကြွစွာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း သိပ္ပံဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်တွေက သူ ငြင်းပယ်လို့မရတဲ့ ကောက်ချက်ချစရာအကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ဒီဇင်ဘာတုန်းက မေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာ “မဟာဉာဏ်ပညာဟာ အသက်ရဲ့ဇစ်မြစ်နဲ့ သဘာဝရဲ့ ခက်ခဲနက်နဲမှုတွေအတွက် တစ်ခုတည်းသော ရှင်းပြချက်ကောင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၁ သူ့ရဲ့ရှင်းပြချက်ထဲမှာ အင်မတန်အရေးပါတာက ဒီအဲန်အေရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ဒီမှာကြည့်ပါ။
ကျနော်တို့ဆဲလ်တွေထဲက ဒီအဲန်အေဟာ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုနဲ့ အလွန်တူပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ကဓာတ်ပုံထဲမှာ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုဟာ (ဘိုင်နရီကုတ် သို့မဟုတ် နှစ်ခုအစုံ သင်္ကေတစနစ်လို့ခေါ်တဲ့) ဂဏာန်းတစ်,တွေနဲ့သုညတွေ တသီတတန်းကြီးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာ သင်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ တစ်တွေနဲ့သုညတွေ အစီအစဉ်ချပေးခြင်း၊ နေရာချပေးခြင်းဟာ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ကို ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်စေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာ၊ ဒီအဲန်အေဆိုတာ ဓာတုပစ္စည်းလေးမျိုးနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပြီး A, T, G, C ဆိုပြီး အက္ခရာတွေနဲ့ အတိုကောက်မှတ်သားပါတယ်။ ဂဏာန်းတစ်တွေ၊ သုညတွေနဲ့ အလားတူစွာ အဲဒီအက္ခရာတွေဟာ လူ့ဆဲလ်ထဲမှာ ခုလို အစီအစဉ်တကျတည်ရှိနေပါတယ် - CGTGTGACTCGCTCCTGAT စသည်အားဖြင့်ပေါ့။ သူတို့ သေသေသပ်သပ်စီစဉ်ထားတဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း ဆဲလ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ညွှန်ကြားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အံ့သြစရာကောင်းတာကတော့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ နေရာသေးသေးလေးထဲမှာ ဒီ သင်္ကေတစနစ်ကုတ်ဟာ အက္ခရာပေါင်းသုံးဘီလီယံတောင် ရှည်တာပါပဲ!!၂
ဆဲလ်တစ်ခုထဲက ဒီအဲန်အေအချက်အလက်ပမာဏကို အကုန်ဖတ်ဖို့ဆိုရင်၊ “တစ်စက္ကန့်အက္ခရာသုံးခုနှုန်းနဲ့ အဲဒီကုတ်ကိုဖတ်ဖို့က နှစ်ပေါင်း ၃၁နှစ် ကြာနိုင်ပါတယ်။ နေ့နဲ့ညတောက်လျှောက်ဖတ်ရင်တောင်ပေါ့။”၃ ခဏနေဦး၊ ဒီ့ထက်မကရှိသေးတယ်။
သင့် ဒီအဲန်အေရဲ့ ၉၉.၉% ဟာ အခြားလူရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ တူညီတယ်လို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။၄ သင့်ကို တမူထူးခြားစေတာကတော့ သင့်ဆဲလ်တွေထဲမှာ သုံးဘီလီယံသော အက္ခရာတွေဘယ်လိုစီထားသလဲ ဆိုတဲ့အထဲက မတူညီတဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးကြောင့်ပါပဲ။
ကျနော်တို့ရဲ့ယူအက်စ်အစိုးရဟာ လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်ဂဏာန်းကိုးလုံး အစဉ်လိုက်စီထားပေးခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်ထဲကလူတိုင်းကို ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ခွဲခြားထုတ်ဖော်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ထဲက ဆဲလ်တိုင်းမှာရှိတာကတော့ သင်သာပိုင်တဲ့ သုံးဘီလီယံအက္ခရာ ဒီအဲန်အေဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကြီးပါပဲ။ အဲဒီသင်္ကေတစနစ််က သင်ဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ဖြစ်စေသလို သင့်ဆဲလ်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံကိုလည်း အဆက်မပြတ် ညွှန်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဒီအဲန်အေအရေးကြီးလဲ သင်သိမြင်နိုင်ပါတယ်
လူ့ဒီအဲန်အေဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ လမ်းကြောင်းမှတ်သားပုံပြပေးသော “လူသားဂျီနုန်း*စီမံကိန်း” ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာဖရန့်စစ်စ်ကောလင်းစ်က “ဒီအဲန်အေဟာ ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ သက်ရှိကလာပ်စည်းရဲ့ ဗဟိုချက်မှာ ရှိနေပြီးတော့၊ ညွှန်ကြားပေးတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခု၊ ဆော့ဝဲရ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုလို မြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။”၅ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်အထူးပြု ပယ်ရီမာရ်ရှယ်လ်က အဲဒါကို ညွှန်းဆိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ “ပုံစံပြုခြင်းမခံရတဲ့ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ဆိုတာမျိုး ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူး။ သင်္ကေတစနစ်တစ်ခုလား၊ ပရိုဂရမ်တစ်ခုလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာစကားအသုံးပြုပြီးပေးပို့တဲ့ သတင်းစကားတစ်ခုလား စသဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အလွန်တရာ ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။”၆ လို့ ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခင်ဘာသာမဲ့ဝါဒီ ဒေါက်တာအန်ထော်နီဖလူး မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ- ဒီ ဆဲလ်ကိုညွှန်ကြားတဲ့ သုံးဘီလီယံရှိသော အက္ခရာသင်္ကေတစနစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မိမိကိုယ်ကိုမေးတာ သဘာဝကျလှပါတယ်။ ဘယ်သူက ဒီစာတွေကိုရေးခဲ့တာလဲ? ဘယ်သူကများ ဆဲလ်ထဲမှာ ဒီ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုတ်နံပါတ်ကို ထားရှိခဲ့တာလဲ?
အဲဒါဟာ သဲသောင်ပြင်မှာ လျှောက်နေရင်းနဲ့မှ “မိုက်က မီရှဲလ်ကို ချစ်တယ်” လို့ သောင်ပြင်မှာရေးထားတာကို တွေ့ရသလိုပါ။ ကမ်းခြေကိုလှိမ့်တက်လာတဲ့ ရေလှိုင်းတွေက ဒါကိုလာမရေးဘူး၊ လူတစ်ယောက်ယောက် ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သင်သိနေတယ်လေ။ ဒါ ကျနော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကား အတိအကျပါ။ ရှင်းလင်းတဲ့ပြောဆိုချက်ပါပဲ။ ခုနကပြောသလို၊ ဆဲလ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို သတင်းပေးပို့ညွှန်ကြားပေးနေတဲ့ ဒီအဲန်အေဖွဲ့စည်းမှုဆိုတာ ရှုပ်ထွေးပြီး သုံးဘီလီယံစာမျှ အက္ခရာတင်ထားတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ကျနော်တို့ ဆဲလ်တွေထဲက ခေတ်မှီဆန်းပြားတဲ့ သတင်းပေးပို့ခြင်း၊ စာဝှက်ရေးခြင်း၊ ဖြစ်တည်နေခြင်းကို ဘယ်သူဘယ်လိုရှင်းပြနိုင်မလဲ?
၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၂၆ မှာ သမ္မတကလင်တန်က လူ့ဂျီနုန်း*အစီအစဉ်ချခြင်းအမှုကို လုပ်ဆောင်ပြီးစီးသူများကို ချီးကျူးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူက “ဒီနေ့ ကျနော်တို့ ဘုရားက အသက်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဘာသာစကားကို လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဘုရားသခင်ရဲ့အသန့်ရှင်းဆုံး၊ အမွန်မြတ်ဆုံးသောလက်ဆောင်ရဲ့ သိမ်မွေ့ခြင်း၊ လှပခြင်း၊ အ့ံဖွယ်ကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ပိုပြီးရင်သပ်ရှုမောနေကြရပါတယ်။”၇ လို့ ပြောပါတယ်။ လူသားဂျီနုန်းစီမံကိန်းညွှန်ကြားရေမှူး ဒေါက်တာဖရန့်စစ်စ်ကောလင်းစ်လည်း သမ္မတကလင်တန်နောက်ကနေ စင်မြင့်ပေါ်လိုက်တက်ပြီး ပြောတာက- “အရင်တုန်းက ဘုရားကသာသိခဲ့တဲ့ ခုလိုမျိုးသင်ကြားပို့ချရေးစာအုပ်ရဖို့ ကျနော်တို့ ပထမဆုံးခြေလှမ်း လှမ်းခွင့်ရပြီဆိုတာသိရတာ ကျနော့်အတွက် သြောချမှင်သက်စရာပါပဲ။” လို့ ဖြစ်ပါတယ်။၈
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဒီအဲန်အေဖွဲ့စည်းမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ ဉာဏ်ရည်သာလွန်တဲ့ (မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် သာလွန်တဲ့) ဖန်တီးမှုပုံစံရှိနေမှန်း ကျနော်တို့ ငြင်းဆိုလို့မရပါဘူး။
သမ္မာကျမ်းစာ (ယင်းကိုယ်တိုင်ပင် အံ့ဖွယ်ရာ သိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့) အဆိုအရ- ဘုရားသခင်ဟာ ကျနော်တို့ဖြစ်တည်မှုရဲ့“ဖန်တီးရှင်” ဖြစ်ရုံမက ကျနော်တို့ဖြစ်တည်မှုကို အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံစေတဲ့ “ဆက်သွယ်မှု” ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဘဝမှာတောင့်တတဲ့ အဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံဆိုင်ရာ (သို့) လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြုနိုင်သော စွမ်းအားများ- ဥပမာ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမဆိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သတ္တိ၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ဉာဏ်ပညာ၊ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ အချစ်ခံရတယ်ဆိုတာသိနားလည်ခြင်း - ဒါတွေကို ဘုရားတစ်ပါးတည်းကသာ ကျနော်တို့ သူ့ကို နာခံကိုးစားတဲ့အခါ ပေးသနားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဘဝမှာ ကျနော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးနဲ့ ယုံကြည်အားထားရဆုံးသောလမ်းပြရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဆဲလ်တွေကိုညွှန်ကြားဖို့ ဒီအဲန်အေကို ပြုလုပ်မောင်းနှင်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့နဲ့ ကျနော်တို့အကျိုးကျေးဇူးအတွက်၊ ဘုရားသခင်ဟာ ကျနော်တို့အသက်တာ အသုံးဝင်အောင်မြင်ဖို့ရာ လမ်းပြညွှန်ကြားနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ကို ချစ်လို့ပါပဲ။
ဘာကြောင့် ဒီအဲန်အေ အရေးကြီးပါသလဲ? အဲဒါ ဘုရားရှိမှန်း သက်သေတစ်ခုပါ။ သူက ကျနော်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေကို ပုံစံပြုတယ်။ အဲဒီလိုပဲ သင့်အသက်တာကို ပုံစံပြုဖို့လည်း ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။ ဘုရားနဲ့ ကျွမ်းဝင်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခု အစပြုဖူးပြီလား? အဲလိုဆက်သွယ်မှုကို အစပြုနိုင်တာက- “ဘုရားကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိခြင်း” ကနေပါပဲ။
“ဘုရားသခင် စစ်မှန်လား?” ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေတဲ့ ပိုမိုအထောက်အထားများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ “ဘုရားရှိသလား?”ကို ဖတ်ရှုပါ။
(၁) Healthy-elements.com/atheists.html (၂) Francis S. Collins, director of the Human Genome Project, The Language of God, (Free Press, New York, NY), 2006, p 1. (၃) Ibid. (၄) Ibid, p 125. (၅) Ibid, p 102. (၆) Perry Marshall, information engineer, cosmicfingerprints.com. (Other concepts in this article also may be attributed to Perry Marshall.) (၇) Francis S. Collins, The Language of God, p 2. (၈) Ibid, p 3.
* ဘာသာပြန်ဆိုသူ၏မှတ်ချက် - ဂျီနုန်းဟူသည် ဆဲလ် (သို့မဟုတ်) သက်ရှိတစ်ခုအတွင်းရှိ မျိုးစေ့ဗီဇများအားလုံးစုစည်းမှုကို ခေါ်ဆိုသည်။